Zinedine Zidane oo qaaday talaab u suura gelin karta inuu noqdo Tababaraha Manchester United – Bandhiga
Zinedine Zidane oo qaaday talaab u suura gelin karta inuu noqdo Tababaraha Manchester United
Tababarahii hore Real Madrid Zinedine Zidane ayaa baranaya luqadda Ingiriiska si ay ugu noqoto dalab hordhac ah uu ku raadinayo shaqada kooxda Manchester United sida ay sheegayaan warbixinada ka imaanaya dalka Ingiriiska.
Wargeyska The Sun cadadkiisii maanta ayaa lagu daabacay in Zinedine Zidane uu isku arko badalka ugu macquulsan ee Mourinho kaas oo loo badinayo in laga ceyriyo shaqada kooxda maadaama uu dhexda ka galay isku dhacyo u la galay qaar ka mid ah ciyaartoydiisa.
Sidoo kale warbixinada qaar ee la helay ayaa sheegaya in Zidane uu iska diiday dhawr dalab oo uu ka helay kooxaha qaaradda yurub, wuxuuna u arkaa inuu ku jiro qorshaha United ee mustaqbalka dhaw.
46-jirkaan reer France ee aduunka ka yaabsaday saddexdii sano ee lasoo dhaafay ayaa riyo u arka inuu fariisto kursiga keydka garoonka Old Trafford, waana kan ugu hadal heynta badan inuu booskaas helo hadii uu meesha ka baxo macalinka reer Portugal.
Dhanka kale wargeyska Independent ayaa qoray in kooxda Barcelona ay dooneyso xiddiga gadoodka ah ee Paul Pogba kaas oo ay isku dayeen intii lagu jiray xagaagii laga soo gudbay, mar kale ayeyse tallaabo u qaadi doonaan bisha January.
Mustaqbalka Paul Pogba wuxuu ku xiran yahay joogitaanka Jose Mourinho iyo sida mar walba loo xaliyo khilaafka ninkaas kala dhaxeeya, maamulka kooxda ayaana dooneysa iney ilaashadaan xiddigooda ugu qaalisan ee qiimaha sare ku yimid Old Trafford sanadkii 2016.